Jizọs, Mezaịa ahụ - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Jizọs, Mezaịa ahụ
Jizọs bụ Mesaya ahụ
N’oge kwesịrị ekwesị, Chineke kpọlitere ohu ya bụ́ Jizọs (Jizọs) ka o mee ka ndị mmadụ pụọ n’ajọ omume ha, (Ọrụ 3:26) dị ka Mozis kwuru, sị: “Jehova bụ́ Chineke gị ga-esi n’etiti ndị gị biliere gị onye amụma dị ka m. . Ị ghaghị ige ntị n'ihe ọ bụla ọ na-agwa gị. Ọ ga-erukwa na a ga-ebibi mkpụrụ obi ọ bụla nke na-adịghị ege onye amụma ahụ ntị n’etiti ndị mmadụ.” ( Ọrụ 3:22-23 ) Ọ bụ onye Chineke họọrọ, bụ́ nwa Chineke nyere anyị iwu ka anyị gee ya ntị. ( Luk 9:35 ) Ọ bịara imeghe anya anyị, ka anyị wee si n’ọchịchịrị gaa n’ìhè nakwa site n’ike Setan gaa n’ebe Chineke nọ, ka anyị wee nweta mgbaghara mmehie na ọnọdụ n’etiti ndị e doro nsọ site n’okwukwe na ya. . ( Ọrụ 26:18 ) O ikpe ikpe ` ikpe ` ́ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ikpe. (Ọrụ 10:42)
Jizọs emeghị ihe ọ bụla n’ike nke aka ya, kama o mere ihe ndị ahụ dị ka Nna kụziiri ya, na-asị, “Anaghị m achọ uche nke m kama ọ bụ uche nke onye zitere m” (Jọn 5:30). N'ịbụ onye Nna ahụ doro nsọ ma zite n'ụwa, o kwulughị Chineke ikwu na ya na Nna ya dị n'otu. ( Jọn 10:35-36 ) Ọ rụzuwokwa ọrụ ahụ Nna ya nyere ya ka ọ rụọ. ( Jọn 17:4 ) N’otu aka ahụ, anyị na Chineke ga-adị n’otu, ndị e mere ka ha zuo okè n’ịdị n’otu, ọbụna dị ka Kraịst na Nna ya dị n’otu, ọ bụghịkwa nke ụwa a. (Jọn 17:22-23)
Jisus bu nwoke a nke Chineke ji ọlu di ike na ọlu-ebube na ihe-iriba-ama di iche iche nke Chineke mere site n'aka-Ya. ( Ọrụ 2:22 ) N’ihi na Chineke ji mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, o wee na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu na-emegbu, n’ihi na Chineke nọnyeere ya. ( Ọrụ 10:38 ) E gburu ya, ma Chineke kpọlitere ya n’ụbọchị nke atọ ma kwe ka ọ pụta ìhè. ( Ọrụ 2:32 ) N’ịbụ onye e nyefereworo dị ka atụmatụ a kapịrị ọnụ na ibu ụzọ mara nke Chineke si dị, ( Ọrụ 2:23 ) E buliwo ya ugbu a n’aka nri Chineke (Ọrụ 2:33) ya mere Nna ahụ emewo ya ma Onyenwe anyị na Kraịst. . ( Ọrụ 2:36 ) Eluigwe anabatawo ya ruo oge mweghachi nke ihe nile Chineke kwuru banyere ya site n’ọnụ ndị amụma ya dị nsọ site n’oge ochie. (Ọrụ 3:21)
Nka bu ndu ebighi-ebi, ka ayi we mara ezi Chineke nke nání Ya, mara kwa Kraist Jisus Onye O zitere. (Jọn 17:3) Eweliri Ọkpara nke mmadụ elu, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya wee nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere ọbuná Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. (Jọn 3:14-16) Ọ bụ ya bụ ụzọ, na eziokwu, na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na ya. ( Jọn 14:6 ) Ọ dịghịkwa aha ọzọ dị n’okpuru eluigwe nke e nyere n’etiti mmadụ ka e site na ya zọpụta anyị. ( Ọrụ 4:12 ) N’ahụ́ Nwa nke Mmadụ, Chineke ewerewo akara ya. (Jọn 6:27) Ndị amụma niile na-agba akaebe nye ya na onye ọ bụla nke kwere na ya na-anata mgbaghara nke mmehie. (Ọrụ 10:43)
Chineke Onye-nzọpụta anyị, chọrọ ka a zọpụta mmadụ nile na ịbịarute n’ọmụma nke eziokwu. N’ihi na e nwere otu Chineke, e nwekwara otu onye ogbugbo n’etiti Chineke na mmadụ, bụ́ mmadụ Kraịst Jizọs, onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile. (1 Timoti 2:4-6) N’ihi na onye ogbugbo gụnyere ihe karịrị otu òtù, ma Chineke bụ otu, (Ndị Galeshia 3:20) Kraịst ebulighị onwe ya elu ka e mee ya onyeisi nchụàjà, kama ọ bụ onye ahụ nke kwuru họpụtara ya. sị ya, "Ị bụ nwa m nwoke, ta ka m'mụrụ gị". ( Ndị Hibru 5:5 ) N’ihi na a na-ahọpụta nnukwu onye nchụàjà ọ bụla a họpụtara n’etiti ndị mmadụ ka ọ na-ejere ụmụ mmadụ ozi n’ihe metụtara Chineke, ịchụ àjà na àjà maka mmehie. ( Ndị Hibru 5:1 ) Jizọs, bụ́ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ejiriwo ọbara ya napụta anyị ná mmehie anyị. (Mkpughe 1:5)
Dika Nna nādi ndu, Jisus nādi ndu n'ihi Nna-Ya, ka onye nābiakute Ya we di ndu, ewe si kwa n'ọnwu bilie n'ubọchi ikpe-azu. ( Jọn 6:57 ) Oge awa na-abịa mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-anụ olu Ọkpara Chineke, ndị na-anụkwa ga-adị ndụ. adịghị adị, n’ihi ya, o nyewo Ọkpara ya ka o nwee ndụ n’ime onwe ya ka ọ kpọta ndị dara n’ụra. ( Jọn 5:25 ) Nna ya enyewo Ọkpara ya ikike n’ebe anụ ahụ́ niile nọ, inye ndụ ebighị ebi. ( Jọn 5:26 ) E nyewokwa ya ikike ikpe ikpe, n’ihi na ọ bụ Ọkpara nke mmadụ. (Jọn 17:2)
Nwoke mbụ, bụ́ Adam, ghọrọ mkpụrụ obi dị ndụ. Adam ikpeazụ ghọrọ mmụọ na-enye ndụ. (1 Ndị Kọrint 15:45) Mmehie si n’otu mmadụ bata n’ụwa, ọnwụ esikwa ná mmehie bata, ọnwụ wee gbasaa ruo mmadụ nile—ọbụna n’isi ndị ahụ na-emeghị mmehie n’oyiyi nke Adam, bụ́ onye bụ ụdị onye ahụ. ga-abịa. ( Ndị Rom 5:12-14 ) Dị ka e site ná nnupụisi otu mmadụ, e mere ọtụtụ mmadụ ka ha bụrụ ndị mmehie, otú ahụkwa ka a ga-esi na-erubere onye ahụ mee ọtụtụ mmadụ ndị ezi omume. ( Ndị Rom 5:19 ) Ebe ọnwụ sitere n’aka mmadụ, mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n’aka otu nwoke. N’ihi na dị ka mmadụ nile na-anwụ n’ime Adam, otú ahụkwa ka a ga-eme ka mmadụ nile dị ndụ n’ime Kraịst. (1 Ndị Kọrint 15:21-22) N'oge ahụ a kara aka, a ga-eme ka ndị nwụrụ anwụ dị n'ime Kraịst si n'ọnwụ bilie, ndị na-apụghị ire ure; ndị na-anwụ anwụ ga-eyikwasị anwụghị anwụ. (1 Ndị Kọrint 15:53-54) Dị nnọọ ka anyị yiworo onyinyo nke onye bụ́ ájá, anyị ga-ebukwa onyinyo nke onye eluigwe. (1 Ndị Kọrint 15:49)
Elu-igwe di ogologo oge gara aga, ekèkwara uwa site n’okwu Chineke. (2 Pita 3:5) Site na ntọ-ala nke ụwa, echiche dị n'ebe Nna ahụ nọ, e sikwa na ya mee ihe nile. ( Jọn 1:1-3 ) N’oge zuru ezu, site n’Okwu Chineke, e mere ka ndụ pụta ìhè, ndụ a bụkwa ìhè nke mmadụ. (Jọn 1:4) Dị ka nzube ebighị ebi ahụ nke Chineke meworo n’ime Kraịst Jisọs Onyenwe anyị si dị, anyị na-ekwusa atụmatụ nke ihe omimi ahụ e zoro ezo ruo ọtụtụ afọ n’ime Chineke Onye kere ihe nile, dị ka atụmatụ maka oge oge zuru ezu iji jikọta ihe nile. nye onwe ya. ( Ndị Efesọs 1:9-10 ) Site n’Okwu Chineke, e debeere eluigwe na ụwa ndị dị ugbu a ka ọ bụrụ ọkụ, na-edobe ya ruo ụbọchị ikpe na mbibi nke ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. Onye-nwe na-enwe ndidi imezu nkwa ya, n’achọghị ka onye ọbụla laa n’iyi, kama na mmadụ nile ga-erute nchegharị. (2 Pita 3:7-9)
Àmà nke Jisus bụ mmụọ nke ibu amụma. ( Mkpughe 19:10 ) Onye a na-akpọ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye eziokwu, n’ezi omume ga-ekpe ikpe ma buo agha. ( Mkpughe 19:11 ) Aha a na-akpọ ya bụ Okwu Chineke, ụsụụ ndị agha eluigwe ga-esokwa ya. Mma agha dị nkọ ga-esi n’ọnụ ya pụta, ọ ga-eji tigbuo mba dị iche iche, ọ ga-achịkwa ha. Ọ gāzọcha kwa ebe-nzọcha-nkpuru-vine nke ọnuma nke iwe Chineke, bú Onye puru ime ihe nile. ( Mkpughe 19:13-15 ) Ọ ghaghị ịbụ eze ruo mgbe o debere ndị iro ya nile n’okpuru ụkwụ ya; gụnyere ọnwụ n'onwe ya. (1 Ndị Kọrint 15:25-26) Mgbe ahụ ọgwụgwụ na-abịa, mgbe ọ na-enyefe alaeze ahụ n'aka Chineke bụ́ Nna mgbe o bibisịrị ọchịchị nile na ikike na ike nile. ( 1 Ndị Kọrịnt 15:24 ) N’ikpeazụ, mgbe e doro ihe niile n’okpuru ya, a ga-edokwa Ọkpara ahụ n’onwe ya n’okpuru onye ahụ nke doro ihe niile n’okpuru ya, ka Chineke wee bụrụ ihe niile n’ime ihe niile. ( 1 Ndị Kọrịnt 15:28 ) Ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa, mgbe ahụ, eluigwe ga-eji oké ụzụ gabiga, ihe ndị dị n’eluigwe ga-erekwa ọkụ ma gbazee. (2 Pita 3:10) Ma dị ka nkwa ya si dị, anyị na-echere eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ nke ezi omume bi n'ime ha. (2 Pita 3:13)
Jizọs bụ ọkpara n’elu ihe niile e kere eke. ( Ndị Kọlọsi 1:15 ) Ọ bụ ihe na-atọ Nna m ụtọ ime ka ya na ya dịghachi ihe niile site n’aka ya. ( Ndị Kọlọsi 1:19-20 ) Anyị na-adị ugbu a site na Kraịst Jizọs. (1 Ndị Kọrint 8:6) N'ihi na Chineke edowo ihe nile n'okpuru ụkwụ Ya. (1 Ndị Kọrint 15:27) Ọ bụ ya bụ mmalite, onye e bu ụzọ mụọ site ná ndị nwụrụ anwụ, ka ya onwe ya wee bụrụ ụzọ n'ihe nile. ( Ndị Kọlọsi 1:18 ) Ọ nwụrụ ma hụ na ọ dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, ma nwee mkpịsị ugodi nke Ọnwụ na Hedis. ( Mkpughe 1:17-18 ) Ọdụm nke ebo Juda, bụ́ mgbọrọgwụ Devid, emeriwo. ( Mkpughe 5:5 ) Onye meworo ka anyị bụrụ alaeze, ndị nchụàjà nke Chineke na Nna ya, bụrụ otuto na ọchịchị ruo mgbe ebighị ebi. ( Mkpughe 1:6 ) Ngọzi na-adịrị eze nke na-abịa n’aha Jehova! (Luk 19:38)
E nwere otu Chineke, Nna, Onye ihe niile si n’aka ya na onye anyị dị adị, ma e nwere otu Onyenwe anyị, bụ́ Jizọs Kraịst, onye anyị si n’aka ya dịrị. ( 1 Ndị Kọrịnt 8:6 ) Nna ahụ hụrụ Ọkpara ya n’anya ma nyefee ihe niile n’aka ya. ( Jọn 3:35 ) Onye ọ bụla nke kwere n’Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi; onye ọ bula nke nādighi-ege nti nwa ahu agaghi-ahu ndu: ma ọnuma Chineke nādikwasi ya. ( Jọn 3:36 ) Ọbụna ugbu a, a na-atụkwasị anyụike n’osisi ndị ahụ. Ya mere anēb͕utu osisi ọ bula nke nāmighi nkpuru ọma, tubà kwa n'ọku. ( Luk 3:9 ) Iji nweta nzọpụta site n’ọgbọ nke a mara ikpe na ịnata nkwa nke Mmụọ Nsọ, anyị aghaghị ichegharị ma mee baptizim n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie anyị. ( Ọrụ 2:38 ) Ọ bụ ya ji mmụọ nsọ na-eme baptizim na ọkụ. ( Luk 3:16 ) Site n’aka ya e doro anyị anya dị ka ụmụ (Ndị Galeshia 4:4-5) na ihe nketa n’alaeze Onyenwe anyị na nke Kraịst ya na-abịanụ, ya mere anyị na-ekwusa, sị: “Oge ahụ eruwo, Alaeze Chineke agwụlakwa. ọ dị nso, chegharịa ma kwere ozi ọma.” (Mak 1:15)